﻿	Ngwa Caesar Salad Mgbakwasa - Ezi Ntụziaka
-esi mee jello gbaa na 6 oz igbe
ebe ịzụta anụ ezi ọbọp scallops
ude nke ero ofe na osikapa
ihe eji eje ozi na azu oji
Ngwa Caesar Salad Mgbakwasa
Mee ngwa ngwa Caesar salad a ngwa ngwa na obere oge!
Dị ka m hụrụ n'anya kpamkpam a arụrụ n'ụlọ caesar salad , mgbakwasa a ngwa ngwa dị ka ihe na-atọ ụtọ (na ntakịrị ntakịrị). A na-egbuke egbuke tangy lemon mgbakwasa na nza nke ekpomeekpo na n'ezie Parmesan cheese!
Ihe mere anyị ji hụ nsụgharị a n'anya
Emehiela m, kwa izu ọ bụla m na-eme salad caesar site na ncha ọ ga-agara anyị niile n'afọ! N'ikwu ya, enwere m ihe ole na ole na-amasị m ụdị ngwa ngwa a:
Ọ dị mfe ịme ma na-apụta mgbe niile ọgaranya na oké (ọ dịghị emulsifying mkpa).
Enweghị igwekota ma ọ bụ igwekota chọrọ (naanị nnukwu efere na ngaji).
Ọ na-eji ihe m na-etinye n'aka mgbe niile (naanị ihe na-adịkarịghị mma bụ anchovy paste, nnọchi n'okpuru).
Versiondị a na-eme ọ bụghị jiri akwa eme ihe.
Ihe mgbakwasa ahụ na-edebe ụbọchị ole na ole toro ogologo karịa ncha akwa (na akwa akwa).
Etu esi edozi Siza Salad
Versiondị a bụ nzuzu dị mfe ịme. Naanị kpalite ihe ndị ahụ!
Ndabere: Ndabere nke uwe a bụ Mayonezi. Nke a na-ewere ọnọdụ nke akwa na mmanụ na mgbakwasa ọdịnala nke ụlọ ma na m hụrụ ya n'anya n'ihi na anaghị m ewepụ ihe igwekota.
Oroma nkịrịsị: Ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ọhụrụ dị mma. Achọpụtara m na ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ọhụrụ bụ tart (utoojoo) na zesty mgbe karama na-enwekarị uto ilu na ya. Ọ bụrụ na ịnwale ha n'akụkụ ibe gị, ọ ga-eju gị anya na ọdịiche ahụ.
Vorstọ: Osisi ohuru, Dijon, anchovy tapawa, na ihe niile dị mkpa nke Worcestershire ihendori ga-emepụta nhazi ziri ezi.
HAVE nwere iji Anchovy Paste?
Anchovy bu ihe di nma na salad nke Caesar ma obu ezigbo ihe kpatara ya. Onwe m adighi acho acho uto azu ma nke a n'eziokwu na-eme ka ejiji karie nke oma. Ọ na-agbakwunye umami, ihe ụtọ ụwa dị ụtọ nke siri ike ịgbanwe.
Iji pasta na-eme ka ọ tinye ya na mgbakwasa (kama ịnwa ịmalite ma ọ bụ belata faịlụ anchovy) ma ọ na-etinye n'ime ngwa nju oyi maka oge maka ejiji na usoro nri n'ọdịnihu.
Enweghị Anchovy Paste? Nsogbu adịghị! Ọ bụrụ na ịnweghị ụdọ anchovy (ma ọ bụ n'eziokwu achọghị iji ya) ọ na-agbakwunye briny nnu nnu na mgbakwasa a na ọtụtụ umami. Capers bụ nnukwu nnọchi ma nwee ike gwerie ma ọ bụ belata nke ọma ma tinye ya.
Mee Ndenye Siza Salad
N’ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, a na-akwadebe Caesar salads n’akụkụ okpokoro ọhụrụ, nke a na-etinye letus ọhụrụ, ejiji na ụfọdụ croutons mara mma. Anyị maara na ị ga-enwe mmasị na nhazi nke a nke Caesar salad n'ihi na ọ nwere ihe niile mara mma nke salad-ụlọ nri mara mma na-enweghị ịhapụ ụlọ!
Ghaa ma ọ bụ bee obi nke letus Romaine n'ime nnukwu efere.
Jiri mmesapụ aka na-eji Caesar salad dressing na top na extra parmesan cheese na nke kachasị amasị anyị, dị mfe ịme arụrụ n'ụlọ croutons ma ọ bụ ikuku fryer croutons .
Mee ka ọ bụrụ salad entrée site n’itinye akụkụ nke ọ bụla na ya grilled ọkụkọ ara , ma ọ bụ salmọn .
Debe Siza salad na-etinye ya na mason ite nwere mkpuchi dabara adaba.
Uwe ahụ ga-adị mma maka ihe dịka ụbọchị 5.
Uwe ejiji anyi
Ube oyibo Ulo Ulo - tangy & creamy
Akwụkwọ nri Salad - njikere na 15 nkeji
Uwe Cilantro Wayo
Uwe Greek Salad - eji ejiji eji eme ihe
You hụrụ nke a Siza Salad Dressing? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
5site naabụọvotu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri5 Nkeji Oge zuru ezuiri na ise Nkeji Ọrụ4 Onye edemedeHolly Nilsson Uwe ejiji nke Caesar Salad a bụ creamy, tangy, ma dịkwa mfe ịme! Bipute Ntụtụ
▢otu iko Mayonezi
▢¼ iko parmesan chiiz grated
▢abụọ mkpụmkpụ galiki grated
▢3 tablespoons ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
▢otu ngaji anchovy tapawa
▢abụọ teaspoons Worcestershire ihendori
▢abụọ teaspoons Dijon Mọstad
▢¼ teaspoons ohuru oji oji
Gwakọta ihe niile eji ejiji, jikọta ya ma gwakọta ya ruo mgbe agwakọtara ya.
Thetọ mgbakwasa na oge na nnu na Additoinal nwa ose dị ka mkpa.
Chekwaa na ngwa nju oyi maka ụbọchị ise.
Calorisị:Ogbe 422,Carbohydrates:3g,Protein:4g,Abụba:44g,Abụba Ajuju:8g,Trans Abụba:otug,Cholesterol:31mg,Sodium:Ogbe 661mg,Potassium:84mg,Eriri:otug,Sugar:abụọg,Vitamin A:92IU,Vitamin C:5mg,Calcium:96mg,Iron:otumg
Isiokwukacha mma Caesar Salad Dressing, Caesar Salad Dressing, Caesar Salad Dressing, etu esi eme Caesar Salad Dressing. N'ezieUwe ejiji Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .